लगानीयोग्य पूँजीमा सहज : वाणिज्य बैंकमा ५८ करोड रूपैयाँ निक्षेप भित्रिदैं – Banking Khabar
लगानीयोग्य पूँजीमा सहज : वाणिज्य बैंकमा ५८ करोड रूपैयाँ निक्षेप भित्रिदैं
लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) को समस्या भोगिरहेका वाणिज्य बैंकहरूमा ५८ करोड रूपैयाँ निक्षेप भित्रिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त प्रवर्द्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागले वाणिज्य बैंकहरूको १ वर्षे मुद्धती निक्षेपमा रू. ४७ करोड र कल (चाहेको वखत तुरुन्तै पाईने) निक्षेपमा रू. ११ करोड रुपैयाँ राख्ने भएकाले उक्र रकम भित्रिने भएको हो ।
उक्त विभागमार्फत विभिन्न परियोजनाको कोषमा रहेको मौज्दात रकम वाणिज्य बैंकमा जेठ ५ गते आईतवार निक्षेप स्वरुप राख्ने भएको हो । उक्त विभागले कार्यक्रम सकिएका परियोजनाहरूको कोषमा रहेको बाँकी रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
यस्ता परियोजनाको बक्यौता रकाम राष्ट्र बैंकले प्राय पुस र असारमसान्तमा सरकारलाई बुझाउने गर्दछ । तर सरकारलाई बुझाउन समय अवधि बाँकी भएकाले सो रकमको सदुपयोग गर्न तथा ब्याज उठाउन भए पनि निक्षेपको रुपमा लगानी गर्न लागेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । उक्त विभागले थोरै ब्याजदर भए पनि आम्दानी भैरहने र चाहेको बखत सरकारलाई बुझाउन सकिने भएकाले वाणिज्य बैंकको कल निक्षेपमा समेत लगानी गर्न लागेको बताएको छ ।
उक्त निक्षेप संकलन गर्न चाहने वाणिज्य बैंकले जेठ ५ गते दिउसो ३ बजेभित्र लिन चाहेको निक्षेप र यसका लागि प्रस्तावित ब्याजदर तोकेर शिलबन्दी दरभाउसम्बन्धि फारम बुझाउन अनुरोध गरेको छ । सो निक्षेप लिन चाहने बैंकले ११ ओटा शर्त पूरा गर्नु पर्ने छ । यसअन्तर्गत निस्किृय कर्जा कुल कर्जा सापटको ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने र न्यूनतम पूँजीकोष कायम भएको हुनुपर्ने छ ।
यस्तै, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको तुलनामा कम्तिमा २० प्रतिशत, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन मुनाफामा रहेको, रियल स्टेट कर्जा तोकेको सीमा अनुसार हुनु पर्ने प्रावधान छ । साथै, कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पूँजी अनुपात बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको लगायतका प्रावधान पुरा गरेका बैंकमात्र उक्त निक्षेप लिन योग्य हुने बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको विभिन्न कोषमा रहेका निस्क्रीय मौज्दात बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउदा अब वाणिज्य बैंकलाई केही राहात पुग्ने छ । यद्यपी बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा निस्क्रीय रुपमा रहेको सरकारको रकम बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार